ကြှနျတေျာ့ ညီမလေး နဲ့ အမကေ ရှဆေ့ငျ့ နောကျဆငျ့ . .ဆယျရကျပဲ ကှာတယျတဲ့ (ကိုဗဈ ဖွဈရပျမှနျ ဖွဈရပျ တခု) – Let Pan Daily
မျောနီတာ စကျပျေါက အောကျစီဂငျြရာခိုငျနှုနျးတှေ ၄၀-၅၀ ထိုးကြ သှားတာမြိုး အရငျက မမွငျဘူးလို့ ဓါတျပုံရိုကျထားလိုကျမိတာ။ ဒီ ဓါတျပုံက သူ့အတှကျ နောကျဆုံးမှတျတမျး ဖွဈမယျလို့ ဘယျထငျမိမလဲ။ ကိုယျကတော့ ပွနျတကျလာနိုးနဲ့ စောငျ့နတော။ ဒါပမေယျ့ ပွနျမတကျလာတော့ဘူး။ အပွီး ပြောကျသှား တော့တာ။ တခြို့က ကိုဗဈကို တကယျ မရှိဘူး ထငျကွတယျ … ကိုဗဈကို ကွောကျရကောငျးမှနျး မသိတဲ့ သူတှေ ရှိသလို လုံးဝ ဂရုမစိုကျသူတှလေညျး ထုနဲ့ဒေး … တကယျတော့ ကိုဗဈက တျောတျော ရကျစကျပါတယျ .. ထငျမှတျ မထားလောကျအောငျကို ဆိုးဝါးပါတယျ … ကာကှယျဆေး မပျေါသေးသလို အရှငျးပြောကျအောငျ ကုသနိုငျတဲ့ ဆေးလညျး မရှိသေးဘူး …
မနကျခငျးမှာ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ ရှိနတေဲ့သူက ညနရေောကျတော့ အောကျစီဂငျြတှေ ထိုးကပြွီး ဘာမှ ကူမရနိုငျဘဲ Expired ဖွဈသှားတဲ့သူတှေ အမြားကွီး ရှိတယျ … သဆေုံးကွောငျး လကျမှတျဆိုတာ ဂြူတီ အဝငျ/အထှကျ လကျမှတျထိုးနသေလို ရေးရတာ … ပွီးတော့ လူနာအိမျကို အကွောငျးကွားပေးရတယျ (မလုပျခငျြဆုံး အလုပျပဲ)။ ဒါပမေယျ့ ခနခန ဆကျနေ ရတာပဲ။ ကိုယျဆကျခဲ့တဲ့ ‌call တှထေဲက တခုဆိုရငျ … မိသားစု ၃ ယောကျရှိတယျ။ အမရေယျ၊ အကိုရယျ ၊ ညီမရယျ။ လူနာရှငျ အိမျကို လူနာ ဆုံးသှားကွောငျး ဖုနျးဆကျတော့ အကို ဖွဈသူ ဖုနျးကိုငျတယျ။ အကို ဖွဈသူက အမနေဲ့ အတူနတေယျ။ အမကေ positive ဆိုတော့ သူလညျး ကှာရနျတငျး ဝငျနရေတယျ။ ကိုယျက သူ့ ညမ အကွောငျး ပွောပွတော့ ..
” ဟုတျလား ဆရာ ” တဲ့ ပွီးတော့ ဆကျပွောတယျ ” ကနြေျာ့ ညီမက အမေ နဲ့ ဆယျရကျပဲ ကှာတာ ” တဲ့ …. “အမလေညျး လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျရကျကပဲ ကိုဗဈ နဲ့ ဆုံးသှားတာ ” လို့ ပွနျဖွတေော့ … ကိုယျလညျး ဘာဆကျပွောရမှနျး မသိ။ ဒါနဲ့ ကနြျောလညျး စိတျမကောငျးပါဘူး အစခြီလို့ ပွောစရာရှိတာတှေ ခပျမွနျမွနျပဲ ပွောလိုကျတော့တယျ။ လူဆိုတာ သမြေိုးလို့ ပွောကွတယျ။ သတော ဘာဆနျးလို့လဲလို့ ပွနျမေးရငျ … ကိုဗဈဖွဈလို့ သရေတာက ဆနျးတယျ၊ ပွီးတော့ တခွား အကွောငျးကွောငျ့ သရေတာတှေ နဲ့ အငျမတနျ ကှာတယျ။ လူဆိုတာ မှေးလာတုနျးကလညျး တယောကျတညျး သတေော့လညျး တယောကျတညျး ဘာမြားထူးဆနျးလဲ လို့ အထှနျ့တကျ ခငျြတကျပေါ့။ ကိုဗဈနဲ့ သရေငျတော့ တကယျ တယောကျတညျး သရေတယျ။ ဆှမြေိုး အသိုငျးအဝိုငျး လညျး လာလို့မရဘူး။ ကုနျကုနျပွောရရငျ နောကျဆုံး အခြိနျမှာ မိနျးမ/ယောကျင်ျကြား/သားသမီး မကျြနှာတောငျ မွငျခှငျ့ရမှာ မဟုတျဘူး။ တကယျကို တယောကျတညျးပဲ။ မသခေငျ မှာလညျး အထီးကနျြရသလို သတေော့လညျး တယောကျတညျး သှားရတာ။ဆိုတော့ မပေါ့ကွနဲ့ဗြို့။ နောကျကစျေ့တှလေညျး အခြိနျရသလို ရေးပွဦးမယျ။
မော်နီတာ စက်ပေါ်က အောက်စီဂျင်ရာခိုင်နှုန်းတွေ ၄၀-၅၀ ထိုးကျ သွားတာမျိုး အရင်က မမြင်ဘူးလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်မိတာ။ ဒီ ဓါတ်ပုံက သူ့အတွက် နောက်ဆုံးမှတ်တမ်း ဖြစ်မယ်လို့ ဘယ်ထင်မိမလဲ။ ကိုယ်ကတော့ ပြန်တက်လာနိုးနဲ့ စောင့်နေတာ။ ဒါပေမယ့် ပြန်မတက်လာတော့ဘူး။ အပြီး ပျောက်သွား တော့တာ။ တချို့က ကိုဗစ်ကို တကယ် မရှိဘူး ထင်ကြတယ် … ကိုဗစ်ကို ကြောက်ရကောင်းမှန်း မသိတဲ့ သူတွေ ရှိသလို လုံးဝ ဂရုမစိုက်သူတွေလည်း ထုနဲ့ဒေး … တကယ်တော့ ကိုဗစ်က တော်တော် ရက်စက်ပါတယ် .. ထင်မှတ် မထားလောက်အောင်ကို ဆိုးဝါးပါတယ် … ကာကွယ်ဆေး မပေါ်သေးသလို အရှင်းပျောက်အောင် ကုသနိုင်တဲ့ ဆေးလည်း မရှိသေးဘူး …
မနက်ခင်းမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှိနေတဲ့သူက ညနေရောက်တော့ အောက်စီဂျင်တွေ ထိုးကျပြီး ဘာမှ ကူမရနိုင်ဘဲ Expired ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိတယ် … သေဆုံးကြောင်း လက်မှတ်ဆိုတာ ဂျူတီ အဝင်/အထွက် လက်မှတ်ထိုးနေသလို ရေးရတာ … ပြီးတော့ လူနာအိမ်ကို အကြောင်းကြားပေးရတယ် (မလုပ်ချင်ဆုံး အလုပ်ပဲ)။ ဒါပေမယ့် ခနခန ဆက်နေ ရတာပဲ။ ကိုယ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ‌call တွေထဲက တခုဆိုရင် … မိသားစု ၃ ယောက်ရှိတယ်။ အမေရယ်၊ အကိုရယ် ၊ ညီမရယ်။ လူနာရှင် အိမ်ကို လူနာ ဆုံးသွားကြောင်း ဖုန်းဆက်တော့ အကို ဖြစ်သူ ဖုန်းကိုင်တယ်။ အကို ဖြစ်သူက အမေနဲ့ အတူနေတယ်။ အမေက positive ဆိုတော့ သူလည်း ကွာရန်တင်း ဝင်နေရတယ်။ ကိုယ်က သူ့ ညမ အကြောင်း ပြောပြတော့ ..
” ဟုတ်လား ဆရာ ” တဲ့ ပြီးတော့ ဆက်ပြောတယ် ” ကျနော့် ညီမက အမေ နဲ့ ဆယ်ရက်ပဲ ကွာတာ ” တဲ့ …. “အမေလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ရက်ကပဲ ကိုဗစ် နဲ့ ဆုံးသွားတာ ” လို့ ပြန်ဖြေတော့ … ကိုယ်လည်း ဘာဆက်ပြောရမှန်း မသိ။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး အစချီလို့ ပြောစရာရှိတာတွေ ခပ်မြန်မြန်ပဲ ပြောလိုက်တော့တယ်။ လူဆိုတာ သေမျိုးလို့ ပြောကြတယ်။ သေတာ ဘာဆန်းလို့လဲလို့ ပြန်မေးရင် … ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ သေရတာက ဆန်းတယ်၊ ပြီးတော့ တခြား အကြောင်းကြောင့် သေရတာတွေ နဲ့ အင်မတန် ကွာတယ်။ လူဆိုတာ မွေးလာတုန်းကလည်း တယောက်တည်း သေတော့လည်း တယောက်တည်း ဘာများထူးဆန်းလဲ လို့ အထွန့်တက် ချင်တက်ပေါ့။ ကိုဗစ်နဲ့ သေရင်တော့ တကယ် တယောက်တည်း သေရတယ်။ ဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်း လည်း လာလို့မရဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် နောက်ဆုံး အချိန်မှာ မိန်းမ/ယောက်င်္ကျား/သားသမီး မျက်နှာတောင် မြင်ခွင့်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်ကို တယောက်တည်းပဲ။ မသေခင် မှာလည်း အထီးကျန်ရသလို သေတော့လည်း တယောက်တည်း သွားရတာ။ဆိုတော့ မပေါ့ကြနဲ့ဗျို့။ နောက်ကေ့စ်တွေလည်း အချိန်ရသလို ရေးပြဦးမယ်။
အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများဖြင့် ကုသသော်လည်း ကု၍ မရပဲ ၃ နှစ်တိတိ ကွယ်နေသော မျက်စိ အခုပိုက်ဆံ မကုန်ပဲ မျက်စိ ပြန်မြင်သွားပါပြီခင်ဗျာ…